Sharciga ka hortaga argagixisada oo dhibaato ku noqday xawaaladaha Soomaalida | Somaliska
Hay’ada la socodka maaliyada ee Sweden (Finansinspektionen) ayaa lagu eedeeyay in ay sharciyada si adag u fasiratay oo ay taasi sabab u noqotay in shirkado badan oo xawaalado ah aysan u suurto galin ay hawshooda qabsadaan.
Mudanaha Soomaaliga ah ee ka tirsan baarlamaanka Sweden Amir Adan ayaa Hay’ada ka dalbaday in ay cadeyso sida sharciyada loo turjumayo, isaga oo sheegay in sharciga oo si adag loo fasiray ay keentay in fursado shaqo oo badan ay lumaan.
ilaa bishii Augusti ee sanadkii 2010 ayaa Finansinspektionen waxay si joogto ah ogolaansho u siin jirtay dadka doonaya in ay furtaan xawaaladaha iyada oo shuruuda keliya ahayd in aysan diri karin ka badan 3 milayn oo yuuro bishii balse ka dib ayaa waxaa soo baxay sharci adag oo sidii doono loo fasiran karo.
Sababta ka dambeysay sharciga cusub ayaa ahayd in laga hortago waxa loogu yeero maalgalinta argagixisada iyada oo ay Finansinspektionen dalbatay in shirkaduhu ay baaritaan sameeyaan sida in la waydiiyo qofku meesha uu lacagta ka keenay iyo in la xaqiijiyo cida uu u dirayo. Inta aan sharciga adag la soo saarin ayaysan jirin cid diidmo la siiyay balse markii sharciga soo baxay ayaa ilaa hada waxaa la diiday 51 shirkadood iyadoo 42 ogolaanshihii lagala noqday.
Shirkadaha dhibaatadaan ku dhacday ayaa waxaa ka mid ah shirkada Olympic Money Transfer oo loo diiday ogolaashihii. Ali Hassan oo ah wakiilka shirkada ee halkaan ayaa wargeyska Dagens industri u sheegay in uusan fahmin sababta loogu diiday sharciga.
Finansinspektionen ayaan dooneyn in ay si faahfaahsan uga hadasho markii wax laga waydiiyay sababta ay ugu diideen Olympic in ay shaqeeyaan balse waxay sheegeen in ay aaminsanyihiin in shirkadaan aysan iyadu hawsha qabaneyn ee shirkado kale ay adeega qabanayaan. Sababta ugu weyn ee shirkadaha loogu diiday sharciga ayaa ah in ay aaminsantahay Finansinspektionen in aysan shirkadahaan samayn karin baaritaan ku filan cida lacagta loo dirayo.
“Shirkadu waa in ay waydiisaa halka lacagtu ka timid, waa in ay soo sheegtaa lacagaha laga shakiyo iyo in aqoonsiga la waydiiyo macaamiisha. Sababta ugu badan ee shirkadaha loogu diido ogolaanshaha waa in aysan ku wanaagsaneyn baaritaanka la xiriira lacag dirista” ayay tiri Therese Malmberg oo ka tirsan Finansinspektionen.
Amir Adan ayaa hada doonaya in Finansinspektionen ay wax ka badasho sida ay shirciyada u fasirto isla markaana ay cadeyso qaabka ay u shaqeeyaan.
“Finansinspektionen waxay bishii augusti si kadis ah u bilaabeen in ay sharciyada u fasiraan si ka duwan sidii hore iyaga oo aan wargalin sameyn. Shirkadahaan waxay lacag badan ku bixiyeen sidii ay u qancin lahaayeen sharciga hayda balse ilaa hada ma bilaabi karaan shaqadooda. Waxaa loo baahanyahay in si degdeg ah loo cadeeyo sida hawshu u socoto. Sida ay maanta tahay Finansinspektionen kuma socoto ujeedada laga lahaa sharciga Lacag dirista” ayuu yiri Amir Adan.
Hadana biilkii cida loo diraayay maa jidka loo istaagay!. Waxaan maqli jirey dad aan dalkaaga ahayn dareen ku joog waaye. Mowloow Allow noo maciin masaakiineen nahee.
masaakiin aan ula jeedaa aqyaarta sorry.
asc dhaman walaahi waa yaab hadi aan boqoliki an diri jirnay yaan la dirin hadi la dhaho somaliya kuwii la biili jiray baa gaajoodoona tolow miyee modan in wax fican eey samenayaan ilaah ba nooqon qurbahan anagoo aan dhib ku qabno qurbahan ayaa la yiri ehelikna yaa wax lo diri ilaah ba u maqan basaankiinta
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sweden wan u duuceyn la haa hadii eey joojiso wax diirka waayo somalii badan ayaa ku dhibqabta oo ifka ka mid tahay soow diir xagee ka keena xiira dheh waxan ku mar marsodanba wayay
in la xidho dan ba ugu jirta somaliya waayo wax bay qabsanayan xoogoday malayaan laakiin hadday maalin kasta sugan dad waxay so diryan waa dhibato
December 9, 2011 at 08:17
Ifraax adiga ma waxaad tahey kuwa u yimid Yurub iney cabaan oo cunaan kaliya oo dhahey waligeyba gaajo ma atag wax iga danbeeyana malahan ?
mahadsanid webka somaaliska meesha ceey loma fuurin
Ali aryaa kaleexo gabarta.Ifraah waa qof kamid ah dadka Komentska dhiibtay iideey u taal waxeey u timid yurub. Tan kale Xawaalada Hadii laxiro tlfnnada mala xiraa walbo waahee nala soo wacaahe xaan dhaheynaa mugaas waxeey ila tahay iney wada xiraan ama kawada leexdaan.dadkiina yaan la,ilaabin arwoodhaha. waxan kusoo qatimaa gableeydaan,,,, DADAALAA LARABAA HADAAD U DUUSHO DAL SHANSHEEYEee
Dhamaan sln . runtii xaalada wax walba oo somaliada la soo darista waxaa sabab u ah somalida manta waan ku raacsanahay in ey joojiso Swedan. sabatoo ah somalia waligeed xawalda aye laheed laakin dhibatada eyga ayaa kenahay oo ALshidaan tageray alshaab iyo dhibaato iyo shaki somalida ayaa sabab u ah .swedana waa ku saxan tahay in la kooltoroolo lacaga baxaya .swedan baahi uma qabta 100 qof maskiin ah loo diraya . aniga waxan qabaa in la isticmaalah xawalada caaliga ah ,lacagaha xawalada somalida iyo xawaladaha caliga wax u dhaxeya waa hal kool oo kofff ah lacag aad ku cabta.
Weger, kolba sheeko yaro canteen ah ha la yimaadan.Way og yehiin qof kasta inta yar oo iska cuna qabateyey inu dadkiisa oo dirayo oo biil joogta ah diro.Lacagtooda dadka lagu biilineyo bey ka gubanayan, ilaahy ba faraj kale inu furi,,,arsaaqda nin kastana ilaahy ba haya.
Asc Walaal Samsam Masha allaaah Afkaga Caano Lagu Qabay,
Alle ayaa Irsaqadahaya Allaaah Kariin